UkuNgena kweBlog: Umqeqeshi webhlog yam | Martech Zone
UkuThimba iBhlog: Umqeqeshi wam weBhlog
NgoLwesibini, Julayi 10, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Uxinzelelo lukhona! UShonnie Lavendar, Umqeqeshi webhlog, undicelile ukuba ndicebise ibhlog yakhe-Umqeqeshi wam weBhlog: Yenza lula ibhlog yokufunda ibhlog nomqeqeshi uShonnie Lavender! Ndithathe isigqibo sokuyeka kwaye ndifunde kwindawo kaShonnie kwaye ndiyavuya ukuba ndiyenzile!
Andikholelwa ukuba kukho ukumelwa okwaneleyo kwimidiya yoluntu yabasetyhini kunye nabancinci. Andinguye ithuba elilinganayo blogger, ndicinga nje ukuba ukuba ngenene siza kufunda komnye nomnye, emva koko sifuna ukumelwa ngokwaneleyo ngabantu. Ndonwabile ukubona abafazi abanjengoShonnie phaya benobukho obomeleleyo. Ndonwabile ukuba imibutho iyathanda BlogHer Bajikeleze- umbutho oboniswa nguShonnie kakuhle!
Kwakhona ngekhe ndibenalo ithemba lokuba ndingathetha nantoni na ngomxholo kaShonnie. Uhlobo lwezithuba, ukunqunyulwa komxholo, kunye nokusetyenziswa kwesibindi, ifonti, iikowuti, iibhloko ezibhaliweyo, uluhlu olunamachaphaza… wow, konke kugqibelele. Ndizokulandela ibhlog kaShonnie ukukhetha iingcebiso kunye namacebo ekubhaleni umxholo ongcono kwaye ndiyibonise kakuhle.
Ndiyayithanda inkoliso yesitayile sendawo yakho. Kwakungekokude ndide ndifike kwiphepha lakho malunga nalapho ndabona khona ubuntu bakho, nangona kunjalo. Utyikityo luvo olukhulu! Ibonisa ubuntu. Ukuba ufanele ufunde naziphi na izithuba zam, ndicinga ukuba umfanekiso womntu ufanele ixabiso lezithuba eziliwaka (doh!). Oko kwathethi, ndibhidekile ngokujonga umfanekiso wakho we-header. Bendingathandabuzi ukuba ingaba imele ntoni na.
Ndibe ne-Photoshop kunye ne-Illustrator yolonwabo ngeendleko zakho! Ndazise ukuba ucinga ntoni!
Emva (Cofa ukuze ubone ubungakanani obupheleleyo kunye nokukhuphela):
EZINTSHA: UShonnie wenza ukhetho olungcono kakhulu!
Ndikhethe umfanekiso weBridge njengomfuziselo wohambo oza kuthatha abafundi bakho. Ndisebenzise ububanzi besiqulatho sakho ukukhupha imibala kunye nomfanekiso. Unokuzama ukubeka isihloko sakho seblogi ngaphezulu koku kunokuba ngezantsi kwayo. Kananjalo, unokubeka le ngasemva kwiphepha lesithuba sakho…. ndicinga nje ngokuvakalayo!
Into elandelayo endiyiqapheleyo sisihloko sephepha "Iingcebiso zeengcali zokuphucula ibhlog yakho (yasimahla)". Sebenzisa isihloko seposi njengesihloko sephepha kuqaqambile! Unokufuna ukuyilandela "ngeBlog Blog yam, uShonnie Lavendar". Oko kuya kunceda iinjini zokukhangela zinxibelelane nomxholo wakho, igama lakho, kunye nomnqweno wakho!
Unayo ifayile yeerobhothi.txt kwisiseko solawulo lwebhlog yakho, blogcoach… kodwa andiqinisekanga ukuba iyanceda ngokwenene. Unokufuna ukubeka ifayile yeerobhothi.txt kwisiseko solawulo lweengcambu kwaye uqiniseke ukongeza indlela kwimephu yakho yendawo:
imephu yendawo: http://shonnielavender.com/blogcoach/sitemap.xml
Unemephu yesayithi kulawulo lwakho lweblugcoach kodwa uyifumana njani injini yokukhangela?!
Ukusetyenziswa okuqaqambileyo kweZithuba ezinxulumene noko kunye neePosti zaMva. Ndingacebisa ukuba uhambise iZithuba zakho zaMva nje uye kwibar esecaleni kwakho phantsi kolwazi lwakho lokuBhalisa, nangona. Khumbula ukuba uninzi lwabantu alunakuhlala kwiphepha lakho lasekhaya, baya kufumana inqaku ngokusebenzisa injini yokukhangela kunye nomhlaba kwelinye lamaphepha akho eposi. Ukuba ujonge ngasekhohlo, uninzi lwamaxesha akho okuThumela okuTsha kuwa ezantsi ngasezantsi kwenqaku. Ndingacebisa ukuyibeka ngokuhambelana nentsimi yombono yabantu.
Umxholo wakho wakhiwe kakuhle. Ndingacebisa ukuba isihloko seBhlog yakho sibe kwithegi yesihloko ye-h1, iiposti zakho zikwithegi yesihloko se-h2… kwaye ufefa izihlokwana zakho kwizithuba zakho ezineethegi ze-h3. Uninzi lweengcali ze-SEO ziyavuma ukuba ii-Injini zokuKhangela ziya kukhokelela kwisalathiso esisekwe apho kwaye usebenzisa iithegi zentloko! (Kodwa bayavuma ukuba i-h4 inefuthe elincinci okanye ayinampembelelo.)
Ndiqaphele ezinye iifonti ezincinci, ngakumbi kwibar esecaleni. Nangona ilingana ngobuhle, ndiyazibuza ukuba ingaba iindwendwe ezinezigqibo ezikhulu kunye nabahloli banokufuna ukuqhwanyaza ukuze babone umxholo wakho. Okumangalisa ngokwaneleyo kukuba, ndiyakhumbula xa wonke umntu wayetshintshela kwiifonti ezincinci. Ngoku ndiyabaqaphela ukuba baya kwiifonti ezinkulu ezinendawo emhlophe ngakumbi. Copyblogger ngumzekelo obalaseleyo. Ngokwam ndonyusa ubungakanani befonti kwibhlog yam kwaye, nangona ndingenabungqina, ndiyakholelwa ukuba iphucule indawo.
Iifolokhwe ngokwendalo zithambekele kwimimandla emhlophe. Imvelaphi yoyilo lwakho imhlophe ngokupheleleyo. Ndicinga ukuba kunokuba kufanelekile ukuvavanya umbala ongasemva omncinci kwibar yakho esecaleni kwaye mhlawumbi uyilo okanye imvelaphi kwibhlog yakho yonke yangasemva. Ukutya nje kokucinga! Andicingi ukuba yenza nantoni na ukwenzakalisa ibhlog yakho, kungenxa yokuba ukuba ufuna ukugxila kumanqaku akho kwaye ungabhaduli- ke umahluko omncinci kwimibala unokunceda!
Enkosi kwakhona ngeli thuba lingakholekiyo. Ndiziva ngathi yintethe xa ndizama ukususa iliwa esandleni senkosi! Ndiyathemba ukuba uyayixabisa ingxelo.
PS: Umsebenzi opholileyo kuthumelo lokutya! Ngaba yayiyiplagi okanye ngaba uhlele ifayile yakho ye-htaccess ukuyithumela ngokuzenzekelayo kwi-FeedBurner? Akwaba bendikhe ndayicinga loo nto!
tags: Umqeqeshi webhlogIntloko yebhlogumnxeba kwisenzoNgokwezifisoiirobhothi.txtshonnie lavendareKhayaxml imephu yendawo
Ukurhola iBhlog: Iposi yokuZithemba
UkuBhlog-UkuThintela: iBhlog yeNdwendwe yeBhlog
Jul 10, 2007 ngo-10: 54 PM
I-OMG, omnye umqeqeshi webhlog! Ndicinga ukuba lixesha lokuba ndiphakamise iflegi emhlophe kwaye ndafumana enye indawo.
Izithuba zakho ziphucule kakhulu iDoug. Qhubeleka nomsebenzi omhle.
… BB (umqeqeshi webhlog wokuqala 🙂
Jul 11, 2007 ngo-9: 22 PM
Enkosi BB! Ukuza kuwe, kuthetha lukhulu !!! Ndiyayivuyela kakhulu ingqwalaselo kunye nenkuthazo osinike yona.
Jul 11, 2007 ngo-9: 24 AM
Inomdla wokufunda, uDoug… Ndiyayithanda kakhulu i-Photoshop header play yakho kunye nefoto yebhulorho… Nangona ndisebenza i-99% yexesha kwi-Adobe Fireworks, ndisavuma ukuba i-PS ikwasisixhobo esihle great
Jul 11, 2007 ngo-1: 02 PM
Ndichukumiseke kakhulu ngokubanzi-kodwa ndinika ingxelo kwiibhloko zabanye abantu, wow! Ngaba uyabiza ngale nto? Kuya kufuneka uyenzile!
Jul 11, 2007 ngo-2: 36 PM
Lutyalo-mali kubafundi, uClive. Kuthatha ixesha- kwaye ndiqinisekile ukuba ndikulungele ukuhlawulisa- kodwa ndisebenza nje kukukhuphela ukubhengezwa kwebhlog yam